Ama Mazama, ọkachamara na asụsụ, okpukpe ndị Afrịka na onye ọkọ akụkọ ihe mere eme - Afrikhepri Fondation
Ama Mazama, ọkachamara na nkà mmụta asụsụ, okpukpe Africa na ọkọ akụkọ ihe mere eme
Amu Mazama bu Afro-Guadeloupean. Ka amachara akwukwo na France, o kpebiri ibi na USA, obodo ebe o kuziri nkuzi na ngalaba ihe omumu Afrika nke Mahadum Temple na Philadelphia. Onye edemede nke ọtụtụ ọrụ, ọ bụ otu n'ime ogidi nke ụlọ akwụkwọ Afrocentric echiche, nke onye sayensị sayensị Cheikh Anta Diop sitere na mmụọ nsọ ya.
N'ajụjụ ọnụ Simon INOU.
Nwere ike ịkọwa onwe gị biko?
Ama Mazama: Abụm Ama Mazama si n'Africa na-agafe na Guadeloupe. Abụ m prọfesọ nke ọmụmụ Afrika na Ụlọ Akwụkwọ Ụlọ Nsọ na United States. Ana m akọwa onwe m karịa ihe niile dị ka Afrocentrist.
Kedu ihe bụ Afrocentrist?
Ịbụ onye na-eme ka ọ pụta ìhè pụtara na onye ahụ na-ekwusi ike, nke mere na mgbe mmadụ na-abịakwute ahụmahụ Afrịka, ọ na-esite na ọdịdị Africa. Ihe mere ugbu a ka ndị Europe na-akọwapụta mgbe nile site n'èzí, n'ụzọ na-ezighị ezi, nakwa site na ndị Europe na-eche na ahụmahụ ha zuru ụwa ọnụ nakwa na ọ bụ uru n'ihi na ha bụ maka ndị ọzọ. Nke a abughi ikpe dị ka ahụmahụ Europe nọgidere bụrụ ahụmahụ Europe. Enweghị ihe ọ bụla, ọ dịghị ihe ọzọ. E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi nọrọ n'ụwa, gụnyere ụzọ nke ịbụ Africa, nke dabeere na akụkọ ntụrụndụ Africa na ọdịbendị.
Ị na-eji ejiji ejiji n'Africa ma yie obe nke Ankh. Kedu ihe ọ na-anọchi anya ya?
Osisi a bụ ihe kachasị ewu ewu na ndị nna ochie anyị, ndị Ijipt oge ochie bụ ndị Black, yiri. Ọ bụ nkwenye n'onwe anyị na nkwenye nke okwukwe anyị na ndụ. N'ihi na ọ dị ebighi ebi. Ndị nna ochie anyị ndị Ijipt oge ochie mere ya n'ihu okpukpe niile dị n'ụwa.
Ankh Cross bụ ihe nnọchianya okpukpe?
Ọ bụ ihe nnọchianya ime mmụọ nke gbanwere ghọọ ihe nnọchianya okpukpe nke Iso Ụzọ Kraịst. Otu akwụkwọ akụkọ Austrian dere na mbipụta ya ụnyaahụ na Fero Touthankhamon bụ nwoke ọcha. akwụkwọ akụkọ ahụ kwuru na nkwupụta a sitere na Zahdi Awas si na Pharaohonic Archives nke Cairo Museum. Kedu ihe ị chere?
Ọ bụ ezi echiche. ọ ka bụ okwu banyere emeghị ihe n'eziokwu nke Europe. Awas nọkwa na Filadelfia otu izu gara aga (17 na 22 September 2007) ma wezie ya mkpesa megide ya. Ọ bụ onye a na-akwụ ụgwọ maka ịgbasa ụgha ndị a. Anyị maara nke ọma na ihe dị nnukwu mkpa.
Nso ke eto?
Gịnị bụ na eto bụ ịnọgide na-enwe echiche ụgha nke Greek ọrụ ebube na-acha ọcha ọgụgụ isi na omenala elu-apụtaghị ìhè na ịkpa ókè agbụrụ na niile ùgwù a na-ọcha nwere arrogated onwe ha aha ha chere na ha ka elu. N'etiti ndị ọzọ, nke na-aga ịmalite imepe ndị na-eme ihe ọjọọ. Na maka anyị ihe nọ n'ihe ize ndụ bụ iji usoro akụkọ ihe mere eme eme ihe. ndị nne na nna nke Touthankamon bụ ndị ojii. Toutankamon dị ka ewetara ya na-acha anụnụ anụnụ bụ akụkọ ihe mere eme na-agaghị ekwe omume. N'ihi ya, ọ dị mkpa maka ịmepụta ihe àmà maka na ha enweghị, Na United States, e nweela ihe ngosi dị iche iche na-egosi ihe ngosi ahụ na-egosi ọcha nke Allakahmon. Enweghi ike igosi akwụkwọ ozi na-egosi ihu ọcha nke Touthankamon.
Ị bụ onye ọkà mmụta sayensị na otu oge onye ọrụ. Kedu ihe mere i ji eme nke a?
Ana m eme onwe m ihe ọ bụla n'ihi na ihe dị mkpa nye m bụ ịhụ ihe na-amalite na njedebe na echere m na ndị nwere ọgụgụ isi nwere ọrụ dị oke mkpa igwu egwu nke ahụ abụghị naanị nke ime nchọpụta maọbụ Iji dee ihe dị mkpa, kamakwa ịgbasa ihe anyị maara, ịkwurịta, ịkọwa, ịṅa ntị na nke anyị na mgbe niile iji gbalịa ịmepụta ihe iji nyere aka ịgbanwe akọnuche anyị. Akụrụngwa bụ akụkụ nke ọrụ m nwere ọgụgụ isi. Achọghị m ihe ọ bara uru ide akwụkwọ ndị na-enweghị eziokwu na nke ndị m. Ọ dịghị amasị m ịrụ ọrụ m ma ọ bụ inwe nkwalite na usoro Western. Ihe na-akpali m bụ ọrụ m na-emere ndị m, agbụrụ m.
Ọsọ ma ọ bụ ndị mmadụ? Ị na-ewepụ abụọ ahụ?
Mba Anaghị m ewepụ ha abụọ. Ọsọ ahụ dị ezigbo mkpa n'ihi na ọ bụ m bụ isi. Ma ụzọ m si akọwa agbụrụ na-eburu n'uche ọ bụghị nanị akụkụ ihe ndị dị ndụ kamakwa omenala na akụkọ ihe mere eme. Ihe abụọ a dị ezigbo mkpa. Site na echiche nke ndị dị na Afrịcentric, ikwu banyere agbụrụ pụtara ilekwasị anya na omenala. Anyị aghaghị ịghọta na ọ bụghị n'ihi na anyị bụ ndị ojii ma ọ bụ Afrika na anyị bụ Afrocentric. Ntughari uche na-akuzi anyi ka anyi gbanwee onwe anyi.
Nke ahụ bụ ikwu?
Iji mụta ịdị ndụ ma na-eche echiche n'Africa ... ..
N'akwụkwọ ukwu gị '' Afrocentric Imure '' ị na-ekwusi ike na agụmakwụkwọ ma hazie okwu a ogologo. Ihe ịma aka ndị dị a doaa ka anyị na-eche ihu taa dị ka ndị Africa, dị ka ndị isi ojii, na agụmakwụkwọ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ nke a na-amanye anyị ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ na-apụtaghị ìhè?
Nsogbu anyi nwere bu na ebumnuche ulo akwukwo a mere ka anyi tinye uche anyi nile inabata anyi na ndi Europe. Nsogbu anyị nwere bụ na anyị agaghị abụ onye Europe. Anyị agaghị adị ọcha. Agwara m otu nwanna nwanyị n’oge nzukọ a. Anyị nwere ike ịgbanwe ọnọdụ mpaghara anyị dịka anyị chọrọ, mana naanị ihe na-adịgide bụ eziokwu ahụ bụ na anyị bụ ndị Africa. Taa, anyị nọ na Vienna na Austria, echi anyị ga-anọ na Paris na France, echi na-esote echi na New York na United States na ndị ọzọ… .we nọgidere bụrụ onye Afrịka. O nwere ilu na-asị "Hapụ mpempe nkụ na mmiri, ọ gaghị aghọ agwo ọwụwa". Ezigbo nsogbu anyị nwere maka nke a bụ na mpempe osisi amaghị na ọ bụ mpempe osisi…. Ọ bụ nke a jọgburu onwe ya, ọnọdụ ọjọọ nke anyị chọtara onwe anyị. Anyị amataghị na anyị bụ osisi, anyị amabeghị onye anyị bụ, anyị na-agwa ọtụtụ ihe na-enweghị isi banyere onwe anyị, gbasara Afrịka ma chefuo na anyị agaghị abụ agụ iyi. Etufuola anyị ihe ndị mere eme. Dịka ọmụmaatụ ajụjụ nke aha ahụ na-atọ ụtọ maka nlanarị nke ọdịbendị anyị wee si otu a.
Ọ bụrụ na anyị gaghachi na agụmakwụkwọ ...
E nwere ihe abụọ ndị Europe mere iji chịkwaa anyị: weghaara anyị aha ma weghaara chi anyị. Na na na na oge na-egwuri egwu. Mgbe ihe ndị a nzọụkwụ abụọ ha na anyị gabiga myọ nke ha na ụlọ akwụkwọ na mere ka anyị na-ata ahụhụ a ngụkọta brainwashing na na na njedebe nke ụbọchị na ọ bụ ezie na anyị na-: Assholes na aru omume, enweghị nchịkwa. N'oge a, mba ndị a na-akpọ onwe ha na-anọgide na-akụziri ụmụ ha akwụkwọ mba ọzọ na ndị ha bụ. Mba ndi a na-akpo anyi onwe anyi amaghi ama. Ikwu ya, o bu eziokwu .. ..O di nkpa ka inwe akwukwo lekwasịrị anya n'Afrika. Mgbasa mgbasa ozi na-arụ ọrụ dị mkpa na agụmakwụkwọ, echekwara m na ọ ga-adị mkpa ka anyị jide ngwaọrụ abụọ a ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkwụsị n'efu. Ma ọ bụrụhaala na anyị na-ekwe ka ndị ọzọ kụziere ụmụ anyị ma ọ bụ kwe ka ndị ọzọ nwee ike ịkụziri ụmụ anyị ihe ha kwesịrị ịma ma n'otu oge ahụ gbanwee ọdịnala anyị, anyị ga-anọ n'otu ọnọdụ.
O buru na anyi na ekwu maka chi anyi. Taa, anyị na-ekwu maka nnukwu okpukpe atọ dị n'ụwa: okpukpe ndị Juu, Iso Christianityzọ Kraịst na Alakụba. Akụkụ Eshia na-eji Zen, Buddhism, Taoism, Zen Nuddhism na-abịa n'azụ ugbu a, anyị na ndị Africa ebee ka anyị kwụ?
Anyị enweghị ebe ọ bụla. Ebe onye German bụ ọkà ihe ọmụma bụ Hegel kwuru na anyị enweghị echiche nke Chineke, ndị ọcha ahụ kwuru na anyị enweghị okpukpe. Ọ bụ ihe a ka m na-akpọ ihe mgbagwoju anya nke amaghị ihe na mpako na-adịgide ...
Otu esi eme onwe anyi onwe anyi taa dika ndi Afrika, dika ndi ozo n'onu otutu okpukpere chi ndi na-abia na ndu anyi kwa ubochi. Ma ànyị nọ n'Africa ma ọ bụ n'èzí Afrika, ọtụtụ ndị Afrịka bụ ndị okpukpe nke okpukpe ọzọ na omenala ha. ịsachasị uche anyị emeela ka eziokwu dị na ọtụtụ n'ime ndị agbata obi anyị na-eme mgbagwoju anya chi anyi n'Africa site na mgba anwansi ma ọ bụ ịgba afa. Olee otu a ga esi edozi nsogbu a?
Echeghị m na e nwere ngwọta dị mfe. Anyị na-ekere òkè n'ibibi njirimara anyị. Ndị ọcha adịghị amanye anyị ịga chọọchị ha, na-eyi aha ha, ikpere ikpere n'ala n'ihu Jizọs acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ Jesus. Anyị emebila okwu ọjọọ a banyere onwe anyị nke ukwuu nke na anyị na-eche echiche na anyị nwere ihe kasị mma ime. Ugbua m na-ekpe ekpere ebe a iji nwetaghachi uche na nghọta onwe onye, ​​ọ bụ naanị ụzọ anyị ga-esi gbapụ anyị n'ezie. Nke a na-emetụtakwa okpukpe dị iche iche na-agbaso ụwa.
Ka anyị laghachi azụ n'okpukpe. Ị bụ onye kwere ekwe? Ọ bụrụ otú ahụ, olee chi ma ọ bụ chi nwaanyị?
Ana m arụ ọrụ ugbu a na akwukwo ihe omimi banyere okpukpe Afrika na Molefi Kete Health. Ọ bụ nnukwu ọrụ na-ewe oge. Ekweghị m na otu Chineke. Ekwenyere m na ike Chineke nke dị n'ime ihe niile. Ndị Western ga-akpọ animism ihe ọjọọ. Ike Chineke a dị n'ime anyị, anyị, gburugburu anyị. Dị ka ị maara, amaara m Vodou dị ka okpukpe m. Echiche nke Vodou bụ isi Afrika. Ọ dị ebe nile AFRICA. Ọ bụ ike dị iche iche nke e nyela aha dị iche iche dị ka ihe atụ Amon Ra wdg. Na Vodou anyị na-akpọ ya Olowum (Gwan-Mèt). Olowum bu otu n'ime aha ndi Yoruba. Olowum bụ chi kachasị elu nke pụtara "onye nwe eluigwe." Mgbe ahụ, anyị nwere chi ndị ọzọ ma ọ bụ Lwa, mgbe ahụ e nwere ndị nna ochie, n'ihi na ha bụ ntọala bụ isi. Nhazi a bu isi Afrika. Ya mere enweghị m nsogbu ịgwa gị ihe m kweere.
Ka anyị rapara na echiche Western nke na-eme ka anyị ghọta na Voodoo bụ anwansi ojii… ọzọkwa na mpaghara ọdịda anyanwụ ihe niile dị njọ bụ ... ojii
Nsogbu a chere m ihu. Ma na ọnọdụ a anyị nwere nhọrọ abụọ: Ma ọ bụ zoo m, ma ọ bụ m were okpukpe m. Ọ bụrụ na m zoo, nke ahụ pụtara na m na-egwu egwuregwu nke colonialism na avata ya. Mba, ekwuru m ya n'ihu ọha, Abụ m onye na-eme Vodou. Ọ bụrụ n’ezi eziokwu ma nwee mmasị, enwere akwụkwọ zuru ezu na ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ m dị ka amoosu jọgburu onwe ya. Enwere m obi ike na onwe m ma nwee udo ... n'ihi na m wepụrụ okpukpe ala ọzọ ndị a manyere ma manye m n'ike. Ihe a niile ga - eme ka m ghara ịbụ onwe m. Ana m edebe ya niile wee laghachi na ọdịnala m.
Gịnị mere na ịlaghachi Ijipt oge ochie?
Enwere m ike ịlaghachi n'Ijipt oge ochie. A sị ka e kwuwe, m na-eyi obe obe ANK bụ nke bụ isi ihe nnọchiteanya maka ndị Afrika. Ọ dịịrị m mfe n'ihi na achọtara m ebe ofufe Vodou na-arụ ọrụ na ememe niile. Na m n'uche na ọ dịghị ihe dị iche iche n'ihi na Voodoo n'onwe ya sitere n'Ijipt oge ochie. Vodou bụ otu n'ime okwu ndị Ijipt n'oge ochie. Anyị nwere nsogbu nke obodo ... Ọ bụrụ na m chọrọ ka oge a mee usoro Egypt ahụ ebe m ga-aga? Mgbe m nọ na Philadelphia ma ọ bụ Haiti, amaara m ebe m ga-aga ma ọ bụrụ Vodou. Egypt nke oge ochie bu otu ihe omuma nke ndi ozo ndi Afrika nile.
N'oge a, n'agbanyeghị ebe anyị nọ, ihe oyiyi si na TV ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa na-awakpo anyị. Ihe oyiyi ndị a na-eziputa ihe oyiyi dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ ma na-ekpughe ihe oyiyi na-adịghị mma mgbe ọ na-abịakwute ojii n'ebe ọ bụla ha nọ n'ụwa. N'otu oge ndị a, TV ndị a n'ọtụtụ ọnọdụ wedara anyị ala. Kedu ihe ndị a nwere ike imetụta na agụmakwụkwọ nwa okorobịa?
A na-ekwukarị na m nwere radical, mana nke ahụ ga-abụrịrị ebe ọ bụla… mana enweghị m TV. Emere m nhọrọ ma ụmụ m toro n'enweghị TV. Onye ọ bụla nwere ike ime nke a ọkachasị ebe ọ bụ na onye ọ bụla nwere ikike ịgbanwuo ma ọ bụ gbanyụọ TV. Offọdụ ụmụ akwụkwọ m na-abịakwute m mgbe ụfọdụ, sị, "Prọfesọ, n'abalị ụnyaahụ, ha gosipụtara ihe agbụrụ ọzọ na TV." Asị m ha: “Gịnị mere unu ji lee ihe a? Gbanyụọ TV ... ”I nwere ike ọbụlagodi ike ịgbanyụ TV. Anaghị m atụ egwu mmetụta na achọghị m ka ndị mmadụ merụọ uche m. TV bụ ihe egwu, ezigbo nsí nye ụmụ anyị. Ọ bụkwa eziokwu na anyị hapụrụ ụmụ anyị n’ihu TV, kọmputa, kamakwa n’ụlọ akwụkwọ. Ọtụtụ ndị nne na nna si Africa na-eme nke a. Anyị na-ebunye ụmụ anyị nri n’ebe ndị agha na-emebi ihe ...
Kedu ka ị si akụziri ụmụaka gị?
Nwa m nwoke nke okenye anaghịzi aga akwụkwọ. Nwa m nwanyị gara ụlọ akwụkwọ Afrocentric. Nwa m, m na-akụziri ya onwe m n'ụlọ.
Ị ka na-aga akwụkwọ. ị nwere diplọma ma ị na-akụzi na USA ... .wii nwa gị agaghị eme ya?
Ọ bụrụ na nwa m nwoke chọsiri ike ịmụ akwụkwọ, ọ ga - enwe nhọrọ ... anyị enweghị ike ịkwụsị ya. Ruo afọ 17-18, iwu ejighi ya ịbanye na ụlọ akwụkwọ. ihe dị mkpa bụ na ọ nwere ike igosi na ya nwere ike. Ọ na-arụ ọtụtụ ọrụ n’ụlọ.
Agbanwe isiokwu - N’Afrika ọ dịghị ihe na-aga n’ihu. Ndị na-eto eto chọrọ ịpụ site na narị otu narị n'ihi na ha chọrọ ịga Europe n'ihi enweghị atụmanya. Atumatu a abughizi oru, o nwechaghi ike inogide na oru ndi ulo oru ego nke Bretton Woods (IMF na World Bank) tiri. N'otu oge ahụ anyị chọrọ ịbụ nke ọgbara ọhụụ na idetuo ọcha.
Ọ bụ n'ezie ọdachi. Otu ugboro, anyị na-alọghachi n'ajụjụ ahụ na-emetụta: Ònye ka anyị bụ? Dabere na azịza nye ajụjụ a, anyị ga-enwe ike ikpebi onye anyị chọrọ ịbụ. Obi dị m ụtọ na ị kpọtụrụ atumatu na ọ bụghị ndị ndú ... Ndị a abụghị ndị ndú. Nsogbu anyị nwere taa n'Africa bụ na anyị na-anabata ihe ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ nke a nabatara dịka ụwa. Ihe nlereanya nke mmepe, mmepụta ihe, modernity etc. ... ihe nlereanya a abụghị ezigbo ihe nlereanya. Ọ bụghị ihe nlereanya na anyị nwere ego iji nweta ma na-elekọta. Ma ọ bụ omenala ọ bụ ihe nlereanya dị oke ọnụ maka anyị. ihe e nyere anyị bụ ihe dị mma nke na-edeghị onye anyị bụ na ya na-ebibi anyị ọbụna karịa ọdịbendị na nke ọha mmadụ. Ana m ekwughachi onwe m. Ajụjụ bụ ihe nlereanya anyị na-agbaso ... onye anyị bụ.
NSOGBU NKE AFRICAN, Mmemme Agụmakwụkwọ Afro: Akwụkwọ Akwụkwọ Pụrụ Iche maka frommụaka site na afọ 8 ruo 13 (Olu nke 2)
43,75€ dị na ngwaahịa
1 dị ọhụrụ site na 43,75 €
Zụta € 43,75
nke September 18, 2020 9:33 pm
Edition Agba nke Mbụ
Publication Ụbọchị 2017T
Ihe ịga nke ọma anaghị echere. N'ebe ọrụ - Napoleon Hill (Audio)
Nzuzo nke ndi n’enwe ihe ịga nke oma mgbe obula - Christian Godefroy (Audio)
N'ike mmụọ nsọ - Wayne Dyer (Audio)